အဲယားဘတ်စ် 32X များအတွက် alaska Livery?
အဲယားဘတ်စ် 32X များအတွက် alaska Livery?2နှစ်ပေါင်း4months ago #1008
ဘယ်သူ့ကိုမှလူး Quintero ရဲ့အဲယားဘတ်စ် 320 အထုပ်တစ်ခု Alaska livery ရှိပါသလား ဒါဟာ Alaska နှင့်အတူပေါင်းစည်းခဲ့သောအပျိုစင်တစ်ဦးကိုအစားထိုးမယ်။
အဲယားဘတ်စ် 32X များအတွက် alaska Livery?2နှစ်ပေါင်း4months ago #1009
သငျသညျ Google တွင်ထိုသို့ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်စေ F-Dore A320 ရုံရိုးရှင်းစွာ PA ဆိုပြီး A320 Alaska Livery ကိုရှာမရကြဘူး, ထိုအထုပ်တခုတိုးမြှင့် Project မှအဲယားဘတ်စ် A320 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကူညီပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။